Baomba teny amin’ny “Galerie Smart” Tanjombato: migadra 15 taona ilay mpampihorohoro | NewsMada
Par Taratra sur 18/09/2019
Raharaha iray lehibe anisan’ny niakatra tetsy amin’ny Tendrom-pitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac) 67 ha, omaly ny momba ilay baomba napetraka tao amin’ny tranombarotra iray lehibe eny Tanjombato. Nilatsaka ny didy ka migadra 15 taona asa an-terivozona ilay nahavita izany. Mbola ho avy koa ny raharaha hafa…
Anisan’ny vesatra niampangana azy ny asa fampihorohoroana. Efatra, ahitana vehivavy iray ireo noahiahina tamin’io raharaha niseho ny 7 jona 2018 io ary niakatra tetsy amin’ny Pac. Hita tamin’ny horonantsary fanaraha-maso eo anivon’io tranombarotra io ny iray amin’izy ireo nitondra entana nampiahiahy ary napetrany tany amin’ny trano fidiovana. Nifanandrify tamin’izany ny fanahiana ny fisian’ny baomba tao amin’io tranombarotra iray lehibe io tamin’izany. Tsy vitan’izany fa niantso an-telefaonina tamin’ny fiteny vahiny ilay nilaza ho nametraka izany ary nanambara fa mbola misy baomba hafa napetrany ao amin’io tranombarotra io. Nandritra ny tontolo andro no nikarohan’ny mpitandro filaminana izany teny an-toerana. Mbola nahasahy niantso an-telefaonina hatrany anefa ilay “mpampihorohoro” nandritra izany na efa fantatra nialoha izany aza ny laharan’ilay finday. Sahy nanitrikitrika mihitsy izy ary nandrahona ilay tompon’ny tranombarotra. “Mbola misy baomba hafa napetrako ao. Na efa napoakanareo aza ny iray, tsy hambarako ny toerana nametrahako azy raha tsy manome vola ianareo”, hoy ny loharanom-baovao nitantara tamin’izany.
Etsy an-daniny, natao fitsirihana amin’ny alalan’ny laboratoara ny poti-javatra tamin’ilay baomba napoaka.
Nalefa teny Tsiafahy sy Antanimora
Sarona ihany anefa izy ireo rehefa natao ny fitsirihana ilay laharan-telefaonina niantsoana sy nandefasana ny hafatra fampihorohoroana nitakiana lelavola 10 tapitrisa Ar. Voasambotra teny Anosimahavelona koa ny vehivavy sy lehilahy iray. Nitohy tany Toamasina ny fanadihadiana satria nisoratra tamina lehilahy iray any an-toerana ilay laharana finday. Niaiky izy fa azy tokoa izany, saingy efa nomeny an’io vehivavy voasambotra io izany laharana izany. Nohamafisin’ny mpampiasa azy rahateo fa tsy nihetsika na nanapaka ny asany io lehilahy io, ny andron’ny 7 jona io. Nampodiana izy taorian’ny fanadihadiana. Ankoatra ireo roa voasambotra ireo, tra-tehaka koa ilay lehilahy ahina ho tena nametraka ilay baomba tao amin’ny trano fivoahan’ny tranombarotra. Anadahin’ilay vehivavy efa voasambotra ihany izy io. Niaiky ho tompon’antoka tamin’izany asa fampihorohoroana izany izy ireo. Nidoboka teny am-ponja eny Tsiafahy ny roa lahy, nialoha ny 26 jona 2018. Nalefa any Antanimora kosa ilay vehivavy. Niakatra tetsy amin’ny Pac ny raharaha, omaly ka izao nilatsaka izao ny sazy.
Niteraka horohoro teto an-dRenivohitra io raharaha iray io tamin’izany…
Raharaha iray niakatra tao amin’ny Pac koa ny tsenam-barom-panjakana teo anivon’ny minisiteran’ny Tanora ny taona 2012. Migadra enim-bolana an-tranomaizina ilay mpandraharaha voasaringotra tamin’izany noho ny tsy fisian’ny asa vita na nitsangana akory. Voarohirohy tamin’izany ny koa tale misahana ny vola eo anivon’io minisitera io sy ny PRMP.